Pyit Time Htaung - Page 41 of 53 - Daily News
ရန်ကုန်မှာ ကြမ်းပြီ…ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်း တစ်ညထဲနှင့် ညမထွက် အမိန့် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူ ၆၀၀ ကျော် ကို အရေးယူ
စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ည က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ညမထွက်ရအမိန့်အား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူ ၆၀၀ ကျော် ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယူလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ အရေးယူမှု မှာ ကျား (၆၁၈) ဦး၊ မ( ၂၉ )ဦး […]
တရုတ်နိုင်ငံသည် လက်ရှိ အချိန်တွင် နျူကလီးယား ဒုံးကျည် (၂၀၀) ကျော် ပိုင်ဆိုင်ထား ဟု အမေရိကန် ထုတ်ဖော်
တရုတ်နိုင်ငံ သည် ယခု လက်ရှိ အချိန် တွင် နျူကလီးယားဒုံးကျည် ၂၀၀ ကျော် ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး လာမည့် ဆယ့်စုနှစ် အတွင်း နှစ်ဆ အထိရှိ လာမည် ဟု ခန့်မှန်း ထားကြောင်း […]
နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ကဗျာ ( ၃ ) ကြိမ် အတွင်း ( ၇၂ ) သိန်း အထိ လေလံဈေး ရနေ
နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့ကဗျာဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ လေလံဈေးကျပ် (၇၂) သိန်းအထိ ရရှိနေတယ်လို့ လေလံပွဲစီစဉ်သူ ဦးမောင်မောင်အေးက ပြောပါတယ်၊၊ ဒီကဗျာဟာ လေလံပိတ်မယ့်စနေနေ့မှာ သိန်းရာကျော်မယ်လို့ ခံစားရကြောင်းလည်း ဦးမောင်မောင်အေးကအခုလိုပြောပါတယ်၊၊ “ ပထမဦးဆုံး […]
မြန်မာကို အသည်းအသန်လိုအပ်နေတဲ့ ရှီတရုတ် ရဲ့ နိုင်ငံရေးကစားမှု ( သို့ ) မြန်မာပြည် တရုတ် သြဇာခံက လွတ်မြောက်ဖို့ အချိန်ကောင်း
By Pyit TimePosted on September 3, 2020 September 3, 2020
မြန်မာဟာ တရုတ် သြဇာခံက လွတ်ချင် ပါသလား??? Xi ရဲ့ နိုင်ငံရေးကစားမှု တရုတ်ဟာ မြန်မာကို အသည်းအသန်လိုအပ်တယ်…!!!! ကျွန်တော် တို့ တစိုက် မတ်မတ် ပြောခဲ့ တာ ဒီနေ့ ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးမှာ တကယ်ကို […]
အမေရိကန်က အနာဂတ် စစ်ပွဲတွေ မှာ အသုံးပြုတော့ မည့် လင်းယုန်စစ်သားတွေ ကို တပ်ဆင်ပေးမယ့် နည်းပညာမြင့် စစ်ဝတ်စုံများ အကြောင်း…
ပစ်ခတ် ၊ ရွေ့လျား ၊ ဆက်သွယ် ၊ ကျော်လွှား၊ ကာကွယ်၊ ထောက်ပံ့။ အင်္ဂါခြောက်ရပ်ကို စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ထားတဲ့ အနာဂတ် စစ်သည်တော် ၀တ်စုံဟာ အမေရိကန် ရဲ့ စိတ်ကူးဖော်ဆောင်နေမှု ပါ ။ […]
ကမ္ဘာ့ နံပါတ်တစ် အမေရိကန် မျက်စောင်းတောင်မထိုးရဲတဲ့ အနေအထား နဲ့ ရရှား ( သို့ ) တကမ္ဘာလုံးပိုင် တဲ့ နျူကလီးယား လက်နက်ထက် ၉၀ % ကျော် များနေသေးတဲ့ အမေရိကန် နဲ့ ရှရား တို့ နှစ်နိုင်ငံပေါင်း နျူကလီးယား လက်နက် ပိုင်ဆိုင်မှု
အမေရိ ကန် နဲ့ ရုရှား နှစ်နိုင်ငံပေါင်း ပိုင်ဆိုင် တဲ့ နျူကလီယာ လက်နက် ပမာဏဟာ (စနစ်တကျ လျှော့ချ ထားပြီးတဲ့ အနေအထားမှာ ပင်လျင်) တစ်ကမ္ဘာလုံးကပိုင်ဆိုင်တဲ့ နျူကလီယာ လက်နက်တွေ ရဲ့ ၉၀% […]
ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှ စမ်းချောင်း မှ ကိုဗစ်လူနာ ( ၃ ) ဦး မှာ MPT ဝန်ထမ်းများဖြစ်
ကျန်းမာ ရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့ နံနက် ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် ကိုဗစ်လူနာ ၃ ဦး ပါဝင်လာကာ အဆိုပါ ကိုဗစ်လူနာ ၃ ဦးမှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ( MPT […]
အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဖောက်ထွင်း တိုက်ခိုက်သိမ်းယူ ခံရပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ကောက်ခံ
စက်တင်ဘာ ၃ ၊ ၂၀၂၀ လွန် ခဲ့ သည့် ဇူလိုင်လ တွင် နိုင်ငံတကာ ထင်ရှားသူ ပုဂ္ဂိုလ်များ ၏ Twitter အကောင့် အများအပြား တို့အား ဖောက်ထွင်း တိုက်ခိုက်မှုတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ […]
ရှီ တရုတ် ပစ်လိုက်တဲ့ဒုံး( ၂ ) စင်းက ဘယ်ကို ပစ်မှန်းမသိဘဲ.. ထကနေတဲ့ တရုတ်လော် တွေ သိဖို့ နဲ့ .. အိန္ဒိယ ကို ကျောနောက်ထောက်ခံပေးနေတဲ့ ခေါင်းဝါကြီး
By Pyit TimePosted on September 1, 2020 September 1, 2020
ရက်ခြား ရက်ခြား မဟုတ်ပဲ သတင်းတွေခက် စိပ်စိပ်တက် လာတာမြင်ရပြန်တော့… Covid အရေးကြောင့် မရေးသေးဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေ မဲ့… တရုတ်လော်တွေ အူမြူးပြီး အသံထွက် လာတာ ရယ်… ကိုယ့်ပရိတ်သတ်တွေလဲ သိချင်နေမှာပဲလေ လို့ […]
အမေရိကန်က တရုတ်ကို လိုချင်တာ ..သိမ်းချင်တာမဟုတ်..( အမေရိကန်က တရုတ်နိုင်ငံ ကို စစ်ရေးမြူနေတဲ့ အကြောင်း အရင်း)
By Pyit TimePosted on September 1, 2020
အမေရိကန် က.တရုတ်ပြည် ကို လိုချင်တာ.။ သိမ်းချင်တာ မဟုတ်ဘူး.။ (CCP) အစိုးရ ကို ဖြုတ်ချချင် တာပါ.။ ကမ္ဘာ့အရေး လေ့လာသူများက ဒါကို အထူး သတိပြုသင့် ပါတယ်.။ စစ်အင်အား နဲ့ ဝိုင်းထားတယ်ဆိုတာအရံအတားနဲ့ […]
အမရေိကနျသမ်မတ ထရနျ့ ၏ မကျြနှာလှဲခဲ့မှုကွောငျ့ တရုတျ တို့ မွနျမာ တှငျ အမွတျထှကျခဲ့ (အိမျဖွူတျောတှငျ ဒျေါနယျ ထရနျ့ ရောကျရှိလာသညျ့အခါ မွနျမာသညျ အမရေိကနျ ရဒေါပျေါ မှ ကှယျပြောကျသှားခဲ့ရပွီလား )
မိသားစု နဲ့ မတွေ့ရ၊ သရဏဂုံလည်း မတင်ရ၊ သင်္ဂြိုလ်ဖို့တောင် ကား မလောက်တဲ့ ကိုဗစ်လူနာ နောက်ဆုံးခရီး
ဒီဇငျဘာ ၄ ရကျ နောကျပိုငျး တှငျ လူသူကငျးဝေးသညျ့ ဘာရှနျခြားကြှနျးသို့ဘင်ျဂါလီမြား ကို ရှပွေ့ောငျးမညျ
စမျးသပျဆဲ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေးကို ကငျဂြုံအနျ နဲ့ မိသားစု အတှကျ တရုတျ လကျဆောငျပေး
ကိုဗဈရှတေ့နျး က ဆရာဝနျ တဈဦးရေး တဲ့ ” အိတျအမဲ နဲ့ထညျ့ ဖို့ ကြှနျတျော တို့ စောငျ့နေ ပါတယျ “
ဗွိတိနျ အမွောကျတပျ နှငျ့ ဖောကျကလနျ စဈပှဲ
ဝဖေနျမှုမြားထှကျပျေါလာပွီးနောကျပိုငျး ရနျကုနျ တက်ကသိုလျဝငျး အတှငျး ဝငျရောကျလညျပတျခှငျ့ တားမွဈလိုကျ